विजय सुवेदी, प्रदेश सांसद
यातायातको हिसाबले देशका सबै भागसँग जोडिएको बहुआयामिक विकासको सम्भावना भएको क्षेत्र हो, चितवन। विकासका दृष्टिले चितवनले हरेक क्षेत्रमा प्रगति गरिरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा चितवन धेरै माथि पुगिसकेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको विकासकै कारण चितवनलाई मेडिकल हब बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा आममानिसमा पनि जागेको छ। तर, यो विषयमा अझै पनि सरकारी निर्णय भइरहेको छैन।
अघिल्लो सरकारले ‘एक सिटी, एक पहिचान’ भन्ने अवधारणा ल्याएको थियो। त्यसमा पहिचान चाहिं के राख्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित सहरको महानगरपालिकाले निर्णय गर्ने भन्ने थियो। त्यसअनुसार नै छलफल भएको थियो। भरतपुरलाई मेडिकल सिटी बनाउने विषयमा भरतपुर महानगरसँग पनि छलफल भएको छ। एक सहर एक पहिचानमा भरतपुरलाई मेडिकल सिटीको पहिचान दिने विषयमा सबै सहमत पनि छन्। यदि यो काम सफल भयो भने हरेक कुरामा काठमाडौंकेन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ।
देश संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा यो विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ। भरतपुर मेडिकल सिटी बन्नु भनेको स्वास्थ्यको मात्र विकास हुनु होइन, शिक्षा, सडक, कृषिलगायतका थुप्रै क्षेत्रमा विकासको लहर ल्याउनु हो। स्वास्थ्यको हिसाबले चितवनलाई मेडिकल सिटीको रुपमा विकास गर्ने र स्वास्थ्यमा नेपालकै केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकियो भने काठमाडौंमा अहिले भएको चापलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।
तर, चाहना राखेर मात्र हुँदैन। पूर्वाधारदेखि सबै कुरामा संस्थागत विकास गर्न सबै तयार हुनुपर्छ। मेडिकल सिटीका लागि सबैभन्दा पहिला म्यापिङ हुनुपर्छ। मेडिकल सिटी हुनका लागि कस्ता–कस्ता किसिमका अस्पताल चाहिन्छन् ? कसरी अस्पतालहरुसँग समन्वय गर्ने ? कसरी यातायातको सञ्जालले सबै ठाउँमा यहाँको आवागमनलाई सुगम बनाउने ? ल्याबदेखि लिएर कस्ता सेवाहरु स्थापित गर्ने र कहाँ–कहाँ गर्ने ?, सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट के गर्ने यसको बारेमा विस्तृत योजना हुनुपर्दछ।
एक वर्ष पहिले हामीले चितवनलाई स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर अवधारणा बनाएका थियौं। त्यसमा स्वास्थ्यसम्बन्धी एउटा निश्चित क्षेत्र पनि छुट्याउनुपर्दछ भन्ने प्रस्ताव राखेका थियौं। हामीले त्यसमा ल्याण्ड पुलिङ गरेर यो क्षेत्रलाई मेडिकल सिटी बनाउन सकिन्छ भन्ने सुझाव पनि दिएका छौं। अरु कुनै प्रायोजनका निम्ति बनाएको घरमा अस्पताल चलाउनु भएन। सबै मापदण्ड पूरा हुनुपर्‍यो। मेडिकल सिटी भएपछि मानिसले उपचारका लागि अन्यत्र भौंतारिनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। त्यहाँ पुगेपछि सबै सेवा पाउनुपर्छ। यो योजनाअनुसार हामीले काम अगाडि बढाउनुपर्छ।
मेडिकल सिटीमा मात्र सबै सेवा भएर पुग्दैन। चितवनका सबै स्थानीय तहमा पनि स्वास्थ्यका इकाई हुनुपर्छ। वडामा सरकारी संयन्त्रभित्र प्राथमिक उपचार दिने पूर्ण सुविधा हुनुपर्छ। त्यसपछि पायक पर्ने स्थानमा केही ठूलो अस्पताल हुनुपर्छ। अनि मात्र मेडिकल सिटीभित्र ठूलो सरकारी अस्पताल हुनुपर्छ। उपचारमा सरकारी र निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्छ। महानगरीय सरकारले योजना बनाउनुपर्छ, त्यसपछि केन्द्रीय सरकारतर्फ जान्छ।
स्थलगत रिपोर्ट :